कार्यक्रमको भिडियो खिच्न सञ्चार माध्यमहरुलाई यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको रोक ! - radionrn.com
कार्यक्रमको भिडियो खिच्न सञ्चार माध्यमहरुलाई यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको रोक !
काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आइतबार मन्त्रालयमै आयोजित एक कार्यक्रमको भिडियो खिच्न सञ्चार माध्यमहरुलाई रोक लगाउनु भएको छ ।
मन्त्री महासेठले आइतबार आफ्नै मन्त्रालयमा अवरुद्ध काठमाण्डौ–नुवाकोट सडक सञ्चालनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति, नुवाकोटको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा पुगेका सञ्चारकर्मीहरुलाई भिडियो खिच्न रोक लगाउनु भएको हो ।
आफ्नो कार्यकक्षबाट कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै उहाँले आक्रामक शैलीमा क्यामेरातर्फ औंलो ठड्याउँदै क्यामेरा बन्द गर्न सचेत गराउनु भयो । ‘यसरी भिडियो लिन हुन्न,’ मन्त्री महासेठले आक्रामक शैलीमा भन्नुभयो, ‘क्यामरा बन्द गर्नुस्, फोटो लिनुस्, यसरी भिडियो लिन हुन्न ।’